विचारद्वारा सुखको खोजी – Chitwan Post
खासमा सुख केलाई भन्ने ? मीठोमसिनो खान पाउने, सफा हेर्दा चट्ट राम्रो लगाउन पाउने । यसो कहीँकतै घुमघाम गर्न पाउने, मन हल्का, शान्त र आनन्द प्राप्त गर्नुलाई सुख भनिन्छ कि ! ठूला घरमा बस्नु, आफ्नै निजी गाडी कुदाउनु, महँगा महँगा ऐसआरामका भौतिक वस्तुहरुको प्रयोग गर्नु, धेरै धन हुनेहरुले थोरै धन हुनेहरुलाई कुनै न कुनै माध्यमबाट होच्याउनु, अरुसँग तुलना गर्नु र मनमनै त्योभन्दा म ठीक छु, सुखी छु भन्ने बुझाइलाई पो सुख भनिन्छ कि ! यस्तो लाग्छ– ‘सन्तोषम् परम् सुखम्” अर्थात् सन्तोष नै सबैभन्दा माथिल्लो सुख हो । सुख भन्ने कुनै वस्तु वा चीजबीज होइन जसलाई सजिलै किन्न पाइयोस्, या त सजिलै नापतौल गर्न र साटफेर गर्न सकियोस् । यो त एउटा अनुभवमात्रै हो । जब व्यक्ति खुशी हुन्छ उसले सुख पाउँछ अर्थात् हल्का महसुस गर्छ । सुखानुभूति गर्छ । यसबाट भन्न सकिन्छ कि सुख विचारमा हुन्छ । विचार मानव मन–मस्तिष्कमा उत्पन्न हुन्छ । विचार दुई किसिमका हुन्छन्–एउटा सुख दिने विचार र अर्को दुःख दिने विचार ।
यदि सुख पाउन मन छ भने सुख दिने खालको सोचविचारलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । सुख दिने खाले विचारलाई हाम्रो मन–मस्तिष्कमा राख्नुपर्छ । कसैसँग तुलना या प्रतिस्पर्धा गरिन्छ भने त्यहाँ विचार उत्पन्न हुन्छ । जब राम्रो काम र परिणामका लागि तुलना र प्रतिस्पर्धा हुन्छ त्यो विचार सुख दिने खाले विचार हो । मानिसमा उत्पन्न हुने एक किसिमको विचार जसले मानिसलाई दुःख दिन्छ । जति नै भौतिक सुखसुविधा होस् जब उसको मन–मस्तिष्कमा दुःखी हुने विचारमात्रै आउँछ भने उसले दुःखै पाउने निश्चित हुन्छ ।
जब मानिसले खुशी दिनेभन्दा बढी दुःख दिने विचारहरुलाई प्राथमिकता दिन्छ स्वतः उसले दुःखको महसुस गर्न थाल्दछ र ऊ दुःखी हुन्छ । प्रायः व्यक्तिहरु कुनै चीजको प्राप्तिमा खुशी हुन्छन् अनि क्षणिक सुख प्राप्त गर्छन् । मानौँ एउटा राम्रो मोबाइल प्राप्त ग¥यो खुशी मिल्यो, कुनै सामान खरिद गर्न पैसा पायो खुशी मिल्यो, जागिर पायो खुशी मिल्यो, बिहे ग¥यो, बच्चा जन्मियो, साथीभाइसँग भेटघाट भयो कुराकानी ग¥यो खुशी मिल्यो र यो खुशीसँगै सुख पनि मिल्यो । आफूले भनेको जस्तो भएन, खोजेको चीजवस्तु प्राप्त भएन भने व्यक्ति आफैँले दुःखको महसुस गर्न थाल्छ र दुःखी हुन्छ । मतलब आफूले भनेको जस्तो भयो खुशी मिल्यो अनि सुख पनि प्राप्त ग¥यो । भनेको जस्तो भएन दुःखी भयो दुःख प्राप्त ग¥यो । यसरी त हाम्रो सुख क्षणिक भयो । सुखलाई क्षणिक होइन सदासर्वदा प्राप्त गर्नुपर्दछ । त्यसका लागि हामीले खुशीको आयुलाई लम्ब्याउनुपर्छ । प्राप्तिमा मात्र होइन अप्राप्तिमा पनि खुशी हुन सक्यौँ भने हामीले सुखलाई प्राप्त गर्न सक्छौँ । त्यसबेला दुःखको महसुस गर्न पर्दैन । खुशीको आयु लम्बिनेबित्तिकै सुखको आयु स्वतः लम्बिन थाल्छ ।
मानिसलाई अनेकौँ विचारहरुले दास बनाइरहेको छ । कहिले कुन विचार आउँछ, कहिले कुन विचार आउँछ । मानिस कहिले यता दौडिन्छ, कहिले उता दौडिन्छ । कहिले यो ठीक हो अब म यही गर्छु भन्छ, कहिले अर्कोचाहिँ ठीक जस्तो लाग्छ पहिलाको काम छोड्छ । यो मानिसमा आइरहने अनेकौँ विचारका कारणले हो । त्यसैले, भन्न सकिन्छ कि मानिस विचारको दास हो । सुख कसरी प्राप्त गर्ने भनेर सोच्न थाल्छ । एकपछि अर्को गरेर विचारहरु आउँछन् । कुन विचार सही हो निर्णय गर्न गाह्रो हुन्छ, त्यसैले व्यक्ति भौँतारिन्छ । जब यो विचार सही हो म यो विचारअनुसार हिँड्छु भनी निर्णय गर्न सक्यो र उसले लक्ष्यलाई प्राप्त गर्न सक्यो भने सुखी हुन्छ । जब निर्णय गर्न सक्दैन, यदि निर्णय गरे पनि त्यसलाई मेहनतका साथ निरन्तरता दिन सक्दैन र त्यो अवस्थामा अर्को विचार प्राथमिकतामा आयो भने व्यक्ति असफल हुन्छ र ऊ दुःखी हुन्छ ।
संसारमा भगवान् गौतमबुद्धको नामले चिनिने व्यक्ति त्यसै गौतमबुद्ध बन्नुभएन । उहाँमा एउटा सोच उत्पन्न भयो । जुन सोचका कारण उहाँले घर, परिवार, धनसम्पत्ति, सुखसुविधा सबै त्याग्नुभयो । उहाँले कुनै व्यक्तिको सल्लाहमा वा कुनै व्यक्तिको विचारको प्रभावमा आएर यो सब गर्नु भएको होइन । आफ्नै मनबाट उत्पन्न विचारलाई साकार रुप दिन घरबाट निस्किनुभयो । निकै कठोर तपस्यापछि उहाँले सिद्धि प्राप्त गर्नुभयो र संसारलाई अहिंसाको ज्ञान दिन थाल्नुभयो । उहाँको जीवन सुखमय भयो । त्यसैगरी, संसारका हजारौँ वैज्ञानिकहरु जसको मन–मस्तिष्कमा यस्तो विचार उत्पन्न भयो जसका कारण टेलिफोन, टेलिभिजन, मोबाइल, कार, मोटर, साइकल, हवाईजहाज, रकेट, रोबोटजस्ता सामग्रीहरुको विकास र निर्माण भयो । उहाँहरुको विचार कहिले यता त कहिले उता वा कहिले यो वा कहिले त्यो भन्ने खालको नभई निश्चित सकारात्मक गन्तव्य पछ्याउने खालको भयो । एउटै सकारात्मक विचारमात्रै आयो, त्यसैले उहाँहरुले सफलता प्राप्त गर्नुभयो र आविष्कारमार्फत सुख प्राप्त गर्नुभयो ।
विचार जोकोहीमा पनि आउँछ र जान्छ त्यसको कुनै मह¤व हुँदैन । मह¤व त्यतिखेर हुन्छ जब विचारले कुनै क्रिया वा प्रतिक्रिया देखाउँछ । क्रिया वा प्रतिक्रिया सुख दिने खालको हो या दुःख दिने खालको हो हामीले छुट्याउनुपर्छ । जस्तैः एउटा किसानले कुनै बाली लगाउनभन्दा पहिले बीउको छनोट गर्छ । राम्रो उन्नत जातको बीउ किनेर ल्याउँछ । बीउ थोरै नै हुन्छ, थोरै बीउबाट धेरै उत्पादन हुन्छ ।
त्यस्तै, मानव मस्तिष्कमा अनेकौँ सकारात्मक, नकारात्मक, आवश्यक, अनावस्यक, व्यर्थका विचारहरु आइरहन्छन् । जसरी किसानले बीउलाई छनोट गर्छ त्यसैगरी व्यक्तिले पनि सही र सकारात्मक विचारलाई छनोट गर्न सक्नुपर्छ, अनिमात्रै विचारले दिने सुखलाई हामीले प्राप्त गर्न सक्छौँ । हामी दुःखी या सुखी के हुन चाहन्छौँ ? जे हुन चाहन्छौँ सोही खाले विचारलाई मन–मस्तिष्कमा अभ्यास गर्नुपर्छ । विचार यस्तो बोकौँ कि भोलि त्यही विचार आफैँलाई मन नपर्ने नहोस्, पश्चात्ताप लाग्ने खालको नहोस् । त्यसकारण पनि सधैैँ सकारात्मक बनौँ, सधैँ खुसी बनौँ, सुखी बनौँ ।